WASIIRKA XIDHIIDHKA GOLAYAASHA OO BEENIYAY WAR UU QORAY WARGEYSKA JAMHUURIYA | Toggaherer's Weblog
URUR SIYAASADEDKA CUSUB EE UDHIS OO SHEEGAY IN AY HAYAAN NIDAAM AY KU HAGI LAHAAYEEN DALKA
WASIIRKA XIDHIIDHKA GOLAYAASHA OO BEENIYAY WAR UU QORAY WARGEYSKA JAMHUURIYA
Wasiirka Xidhiidhka Golayaasha oo Beeniyay War uu Qoray Wargeyska Jamhuuriya, Kana Hadlay Qodobo kale
Hargeysa Wasiirka Xidhiidhka Goleyaasha Somaliland, Md. Cabdi Xasan Buuni ayaa shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay Xafiiskiisa ku beeniyay war uu Wargeyska Jamhuuriya qoray, kaasoo sheegayay in wiil uu dhalay ay dawlada Itoobiya u xidhay falal la xidhiidh tahriibinta dadka.
Wasiirka oo hadalkiisa ay ka muuqato taxadar gaar ah ayaa ka hor intii aanu si rasmi ah u hadal ka cudur-daartay in aan waxba lagu darin hadalkiisa, isaga oo daba-socday warar uu sheegay in siyaabo khaldan hore looga baahiyay.
Waxaana uu hadalkiisa ku bilaabay sidan: “Wargeyska jamhuuriya cadadkiisii 22-ka bisha waxay ku qoreen Wasiirka Xidhiidhka Goleyaasha oo wiil uu dhalay Itoobiya ay u xidhay fadeexado tahriibinta dadka, anigana sawirkayga ayay ku soo dhajiyeen. Waxa weeye arrin aniga ii taabatay, ninka waxaa laga sheegayna, laguna ceebaynayo oo aanay waxba ka jirin, aniguna aan la xidhiidhay safiirka inoo fadhiya Itoobiya markii warkani soo baxay. Jamhuuriya ayuu toos ula soo hadlay, wuxuu yidhi ninkan aad leedihiin wuu xidhan yahay waakan I ag-fadhiya ee la hadla, wuu la hadalsiiyay, wuxuuna ka codsaday Jamhuuriya inay beeniyaan hadalka ay ku soo qoreen halkaa. May beenin, oo tifaftire Cirro ayaan la hadlay oo aan ku idhi waxaan doonayaa sourcekii uu warkani ka yimi.. ilaa iminka ininkii wuu ka warwareegayaa oo waakaas saakaba iman waayay.” ayuu yidhi Wasiirka XIdhiidhka Goleyaasha, waxaana uu intaa ku daray inuu Distoorku xaq u siinayo qof kasta oo Muwaadin ah in aan meel lagaga dhici Karin karaamadiisa, magaciisa iyo shakhsiyadiisaba.”
Isaga oo si toos ah ula hadlaya warbaahinta waxa uu wasiirku ku dardaaray sidan: “idinku waxaad tihiin meesha ama nabadgelyada laga sugi karo, ama nabadgelyo la’aan horseedi karta. Adeerayaal waxaan idinka codsanayaa oo aan idin leeyahay nin walba nimanka tifaftirayaasha ahoow dib isugu noqda, oo waxaan idinka codsanayaa wax qof sharaftiisa dhaawacaya in aydaan qorin.Tusaale ahaan aan u soo qaato Madaxweynaha waxa doortay shacabka Somaliland, waxaanu sitaa sawirka Somaliland inta uu joogo, Maxamed Axmed Siilaanyo waa nin u tartamaya jagada Madaxweynaha berina noqon kara, Faysal-na sidoo kale waa xaaraan in lagu tilmaamo qolo ama qabiil. Madaxnimaduna waa mid shalay la soo maray, maanta lagu jiro, berina lagu noqon karo. Hadaad idinku tihiin saxaafadii warbaahinaysay waa inaad dadka dhex u noqotaan, wixii xasaasiyad abuuraya ama qof dhaawacayana iska ilaalisaan.”
Wasiirku waxa uu si wayn u dhaliilay dhaqanka masuuliyiinta 3-da xisbi qaran ay mudooyinkan dambe ay cadaysteen isaga oo aan laf ahaantiisu iska saarin masuuliyiintaas uu cambaareeyay oo uu sheegay inuu ka mid yahay. “Arrin keenku waa umadda waa 5%, 95% waa aqbal keen. Anigu waxaan ka mid ahay shantaas arrin keenka ah, shantii arrin keenka ahayd ee aan ka midka ahay ayaa bukta. Saddexda xisbi qaran, waxaynu u samaynay waxay ahayd inaynu ka baxno qabiil iyo anaaniyad oo aynu qaran u baxno, oo saddexdaa calaamadood aynu ku abtirsano.
Dadka Somaliland waa dad nabad jecel oo fahmaya dhibaatadii ay soo mareen dad si sahlan loo khaldi karo maaha. Hadii aynu madaxna nahay aynu u noqono Ilaahay oo aynu dhaartii aynu galay. Ninka xisbi u dhaarta iyo ka dawlad u dhaartaaba waa isku mid.”
Wasiirku waxa kale oo uu jawaabo ka bixiyay su’aalo ay waydiiyeen suxufiyiintii shirkaasi jaraa’id ka qayb-galay oo aad u tiro badnaa.